ए यस्तो पो…….. - Tanahun Awaj
Home कला/मनोरन्जन	ए यस्तो पो……..
11th June 2020 11th June 2020 102 views
‘किसानैको राम्रो सुखमय आहा जीवन काल
खनीखोस्री रोपी लहलह बनाई सव खला !’
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले किसानको प्रसंसामा रचना गर्नुभएको कविताको एक अंश हो यो । किसान मानव मात्रको अन्नदाता नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतकै उदरपुरक भन्दा पनि फरक नपर्ला ! पृथ्वीमा जति मान्छे छन् ती सबलाई जीउँदो बनाई उभ्याउने चीज खाना हो । खाना जे सुकै खाउन, जस्तो सुकै नाम गरेको खाउन, आखिर त्यो खानाको श्रष्टा किसान हो । जलचर, स्थलचर जेसुकै हुन् किसानकै उपजको लित्कोपित्कोले धानेको हुन्छ । घरपालुवा वा जंगली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कृषि उपजले नै भरण पोषण गरिरहेको हुन्छ । दुई खुट्टे वा चार खुट्टे, मुसा हुन वा खरायो, दुम्सी मिर्ग, हरिण, गैडा हात्ती र कमिला समेतलाई पनि किसानकै पसिना पाखुरीको उपजको स्वादले रमाउँछन् । यसरी भन्दा सबैका पालनकर्ता किसान । यी सबैसंग पंखेजोरी खेल्नु पर्ने किसान ।
किसानले गरेको उत्पादन कसैले किनेर खान्छन् । कोही मागेर, कोही खोसेर, कोही लुकेर, चोरेर, फकाएर, झुक्याएर जे गरेर हुन्छ खान्छ खान्छ । एक दिन खान नपाए रन्थनिन थालिहाल्छ । ओठ मुख सुक्छ । हातखुट्टा बाउँडिन थाल्दछ । उ लखतरान हुन्छ । मै हूँ भन्ने बलविर पनि लठ्ठीको साहारामा उभिन पर्ने हुन्छ । यी सबका पालनकर्ता किसानको न मान छ, न इज्जत । भर्जन्म खेती गरी बजारतिर झरेकाहरुले समेत पाखे भन्ने रे ! उनै पाखेले लगिदिएको दुई चार माना कोदो, मकै, मास, भट्ट तथा आलू, पिँडालु, लसुन, प्याज, साग मुला पाउँदा खुशी हुँदै गाउँबाट ल्याएको अग्र्यानिक भन्दै लुछाचुडी गरी खान पर्ने ! भैंसी पाल्दा दुःख हुनेलाई बजार झ¥यो कि त्यही गाउँको घिऊ चाहिने ? यस्ता नकच्चराहरुले अलिकति सोंचुन्, आफैले दुःख लागेर छाडेको त्यही चिज अर्काले उब्जाएको खान ।
एक्काईसौं शताब्दी, विज्ञान र प्रविधिले चरमउत्कर्षमा पुगेको यो युग र म जस्ता किसानले जोत्ने गरेको हलोलाई दाँजेर हेरौं, सायद त्रेता, द्वापर युगतिर बनेको हलो होला, त्यसमा ठोकिने एउटा ठेडीसम्म नयाँ खालको बनाएर प्रयोग गरेको देखेको छैन । फाली, करुवा, अनौ, हरिस, सापो, जुवा, नारा, जोतारा जस्ताको तस्तै छन् । एउटा चिज पनि सुधार गरी त्यसलाई अझै सरल बनाउन जस्तो सुकै कृषि विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ताले अझसम्म सकेको देखिएन । हाम्रा पुर्खाले त्यो खाले हलो नबनाई दिएको भए खेती को त कुरै छोडौं, गिठ्ठा म्याकुर खाएर बसेका हु्ने थियौं होला हामी । यो भन्दा कतिलाई कन्सिली तात्ला ? टेक्टर देखेकै रहेनछ कि भन्लान ? आधीले हलो पुगेको ठाउँमा ट्याक्टर पुग्छ ? हलो जस्तै सर्वसुलभ छ ? म जस्ता सबै किसानले किन्ने र चलाउने हैसियत छ ? खेतवारी सबैमा टेक्टर लाग्छ ? अहँ छैन । फेरी आयो कुरा उही हलो कै । जस्तो ठाउँमा नि जोत्ने, जस्ताले नि जोत्न जान्ने, न तालिमको झन्झट, न पाटपुर्जा नपाईने पिर, न आयात निर्यातमा ट्याक्स, विग्रयो कि उतिखेरै बनाउन सकिने । यस्तै नेपालका कुना काचाको माटोले मन पराएको हलो जस्तै सर्वसुलभ यन्त्र आविश्कार गर्न वैज्ञानिकलाई कति बर्ष लाग्ने हो ? कि यता कसेको ध्यान नपुगेको होला ?
यसो विचार गर्दा मेरो खेती गर्ने तौर तरिका पनि अचम्मको लाग्दछ । बाह्रै महिना केही न केही खेती लगाएकै हुन्छु । बाह्रै महिना याने कि महिनै पिच्छे खेती स्याहारि राख्या नि हुन्छु । मलाई कुनै महिना फुर्सद छेन । कि त खेती लगाउने काम हुन्छ, कि त स्याहार्ने । ताजुवको कुरा खाना पकाउने बेलामा कि त चामल हुँदैन । कि त तरकारी । एउटा न एउटा समस्या मलाई आउँदछ । बाह्रै महिना खेती लगाउने र स्याहार्नेलाई कम्तिमा खान त पुग्नु पर्ने हो । तर पुक्दैन । यसको अर्थ मैल अझै बुझेको छैन । सायद आफैले उत्पादन गरेको उपजले आफैलाई खाना पुग्दो रहेनछ । मेरा साथी कृषक धेरै हुनुहुन्छ होला ।
आखिर म कस्तो किसान ?
१) कहिल्यै फुर्सद नहुने ।
२) खेती गरेको छ, आफैलाई खाना नपु¥याउने ।
३) पृथ्वीमा उत्पादन हुने सबै खेती गर्न मन हु्ने, रोप्ने बेलामा बीऊ पनि किन्नु पर्ने ।
४) भैसी पाल्ने, अन्नजति त्यसैलाई ख्वाएर सक्ने ?, घ्याू नभएर तेलको भुटुन खाने ।
५) पकाउने बेलामा तरकारी नभएर खोज्दै हिड्ने, वा किनेर बजारको खाने ।
६) आफूले निर्णय नगर्ने, अर्काले खेती गरेको देखेपछि मात्र
७) उत्पादन र खर्चको लेखाजोखा नगर्ने । धान काट्ने, उठाउने, दायीँ गर्ने काममा विहेको भन्दा ठूलो भोज गरेर शान देखाउने
८) घर हुँदा प्रवाह नगर्ने, सकिएपछि ठण्डाराम भएर
९) अलिकति बढी भएको उत्पादन उधारो दिई असामी लगाउने ।
१०) नयाँ प्रविधि, ज्ञान सीप तालिम मल वीउ अनुदानको खोजी नगर्ने । सबले भन्दा बढी जानेको छु भनेर घमण्ड गर्ने ।
११) आफूले नगर्ने अर्कोलाई सिकाउने ।
म र मै जस्तो कृषि प्रणालीलाई बेलैमा सुधार गरिएन भने भोकमरी पहिला किसानबाट शुरु हुने भो । अरुको त कुरै छोडौं ।
बलीले कोरोना संक्रमणबाट बचिदैन
बहीनीको सपना, ढलेको धरहरा